13 | octobre | 2020 | InfoKmada
Accueil 2020 octobre 13
Fifidianana loholona : androany vao nanatitra antotan-taratasy ny teto Antananarivo
InfoKmada - 13 octobre 2020 0
Tafapetraka androany ny firotsahan-kofidian'ny lisitra kandidà ho loholon'ny Madagasikara eto amin'ny faritanin'Antananarivo natolotry ny vovonana IRD. Herminana RAZANAMAHEFA no mitarika ny lisitra, kandidà faharoa kosa ny I Sylvain RABETSAROANA, loholona teo aloha.
JAOJOBY : notolorana mari-boninahitra « commandeur de l’ordre national »
Notolorana ny mari-boninahitra commandeur de l’ordre nasionale ny mpanakanto jaojoby. Ny fanandratana ny gadona ahafantarana an’i Madagasikara ho fantatra maneran-nay no isann’y antony nanolorana azy ny mari-boninahitra raha ny fanazavana.
Sekolim-panjakana : tsy misy ny vola aloa amin’ity taom-pianarana 2020 -2021 ity
Nanamafy ny minisitry ny fampianarana amin’ny tsy fisian’ny vola aloan’ny ray aman-dreny mandritry ny fidiran’ny mpianatra amin’ity taom-pianarana 2020-2021 ity eny amin’ireo sekolim-panjakana.Etsy ankilany, samy isitraka ny fanavaozana isan’isany ireo sekoly isaky ny faritra sy distrika eto Madagasikara.
Antoko MMM : fandalàna ny Demokrasia ny fandraisana anjara amin’ny fifidianana
Fanohanana ny filoham-pirenena amin’ny fampandrosoana ny firenena sy fandalàna ny fitsinjaram-pahefana no antony nandrotsahan’ny Antoko Malagasy Miara-Miainga kandidà ho Loholon’i Madagasikara. Izay no novoitra nandritra ny fotoana nampahafantarana ireo kandidan’ity antoko ity tamin’ireo mpifidy lehibe mpiara-dia amin’ny Antoko MMM androany teny amin’ny foibe toerany eny Ankerana.
Antoko Malagasy Miara-Miainga : nanolotra kandida Loholona teto Antananarivo
Tafapetraka androany teny amin’ny Ovec Nanisana ny taratasy firon-tsahan-kofidian’ny kandida ho loholon’i Madagasikara avy amin’ny Antoko Malagasy Miara- Miainga, ka i RAKOTONDRAINIBE Michel no lohalisitra amin’izany. Laharam-pahamehana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy hoy ity kandida ity.
Andry RAJOELINA : hafainganina ny fametrahana ny faritra faha 23
Hafainganina hoy ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fametrahana ny faritra faha 23 ao Mananjary. Araka izany, ho dinihina ao anaty filankevitry ny minisitra ny alarobia ho avy izao ny volavolan-dalàna mahakasika izany ka hatolotra ny Antenimiera.
SOAVINA : rongony maina 20 kitapo no nodorana
Rongony maina 20 gony no nodorana teo anatrehan'ny mpitandro filaminana sy ny teo anivon'ny solontenan'ny fitsarana androany maraina teo anivon'ny Commissariat de Police – Soavina, Distrikan'Atsimondrano. Ireto rongony ireto izay tra-tehaky ny polisim-pirenena Soavina sy ny Andrimasom-pokonolona ny herinandro lasa teo.